Rakib OEM sheet bir laaban qaybo warshad iyo alaableyda | Ouzhan
Qaybaha birta ah ee xaashida ah waxaa ka mid ah foorarka, ka shaqaynta beddelaadda xagasha xaashida ama saxanka. Sida foorarsiga saxanka oo ku jira qaab V, U qaab ah, iwm. Ma sameyn karno la'aanteed qeybaha birta ah meel walba oo nolosheena ah. Qaybaha birta xaashida waa iyada oo loo marayo birta korontada, bir goynta laser, farsamaynta culus, isku xidhka birta, sawirka birta, goynta plasma, saxitaanka alxanka, duubista duubista, xaashida biraha laalaada, dhinta been abuurka, goynta jet biyo, saxitaanka alxanka.
OEM sheet bir laabaya qaybo-sheet sax qalliinka qaybo mashiinada processing
Waxyaabaha Saxan duudduuban oo qabow, saxan galvanized, ahama, aluminium saafi ah iyo daawaha aluminium, naxaas saafi ah iyo daawaha naxaas ah, tiknoolajiyada waxsoosaarka dusha sare ee birta
Hore: Qalabka birta ah ee foorarsiga birta ah
Xiga: Qaybaha birta xaashida goynta leysarka